မြန်မာ ပိုကာ ZingPlay - Thirteen Poker - Rummy के लिए Android फ्री डाउनलोड – 9Apps
कैसिनो | 25.7MB | आधुनिक बनायें: 2019-11-09 | संस्करण: 7.1.3 | आवश्यक है: Android4.0 या बाद में
9Apps services for free Android apps. 20,000+ users downloaded မြန်မာ ပိုကာ ZingPlay - Thirteen Poker - Rummy latest version on 9Apps for free every week! If you are not comfortable with the old version then you can updated it right now. This hot app was released on 2019-11-09. That’s it! You’re done?
၁၃ ချပ် ပိုကာသည် မြန်မာနိုင်ငံ တခုထည်းတွင်ရှိသော အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးရိုးရာဂိမ်း တခုဖြစ်ပြီး လူများစွာဆော့ကစားလျက်ရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ကစားသူတွေနဲ့အတူ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
Myanmar မှ ၁၃ချပ်ပိုကာသည် မည်သည့် Operation System တွင်မဆို သာလွန်သော ရုပ်ထွက်များနှင့် အတူ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်န်ိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံး ရိူးရာကတ်ဂိမ်း လည်းဖြစ်သည်။
13 ချပ် ပိုကာ ဂိမ်း ကို အခုပဲ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ရွှေလက်ဆောင်များကို အခမဲ့ နေ့စဉ် ရယူကြမယ်။
VIP ပိုမြင့်လေ ပိုပြီး အကျိးခံစားရလေ၊ အခမဲ့ Chips တွေအများကြီးရှိပါသည်။
အထူးခြားဆုံးမှာ မြန်မာပိုကာရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ စားဖဲ ဆွဲဖဲတွေ ကို နည်းလမ်း မှန်မှန်နဲ့ ကစားရသောကြောင့် ပိုပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ပျော်ရွှင်မှု့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကစားသူများ ၁သန်းလောက် ကစားနေကြသည်။
एक पारंपरिक खेल के ऑनलाइन मनोरंजन में म्यांमार की चौड़ाई का 13 स्लाइस एक साथ खेलते हैं। म्यांमार भर में मज़ा गतिविधियों लोग हैं, जो इसे खेलने के साथ सामना करने के लिए।
म्यांमार किसी भी बेहतर छवि पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 13 स्लाइस शराब के साथ अच्छी तरह से काम किया। बेस्ट ရိူး कार्ड खेल।
खेल के 13 स्लाइस सोने की उपहार प्राप्त और अब नि: शुल्क दैनिक डाउनलोड करेगा।
उच्चतर वीआईपी महसूस ကြိး यहां नि: शुल्क चिप्स का एक बहुत है।
सबसे महत्वपूर्ण तरीका प्रतीक, रेशम सूट और खुशी प्रदान कर सकते हैं और नियमित रूप से सक्रियता को छोड़कर आकर्षित करने के लिए।
खिलाड़ियों को 1 लाख खेल रहा है।
Want to find some interesting android apps? This top Casino app is just 25.7M. This isasubversion of the traditional app. 9Apps also provides other hot Casino apps(games) for android mobile phone. Download and enjoy the latest version of this app now.
မြန်မာ ပိုကာ ZingPlay - Thirteen Poker - Rummy 7.1.2 APK (आधुनिक बनायें: 2019-01-09) डाउनलोड
မြန်မာ ပိုကာ ZingPlay - Thirteen Poker - Rummy 7.1.1 APK (आधुनिक बनायें: 2019-01-08) डाउनलोड
မြန်မာ ပိုကာ ZingPlay - Thirteen Poker - Rummy 7.0.1 APK (आधुनिक बनायें: 2018-12-25) डाउनलोड
မြန်မာ ပိုကာ 13 ချပ် - Rummy 7.0.0 APK (आधुनिक बनायें: 2018-11-22) डाउनलोड